China FOTON U12 factorylọ ọrụ na ndị nrụpụta | Foton
FOTON U12 ọla edo Powertrain pụta ìhè magburu onwe ike arụmọrụ na ala oriri, izute gị mkpa maka mgbe ụfọdụ ọrụ na-arụ ọrụ mgbe nile na anya.
N'ozuzu Dimension 1200 * 2550 * 3790
Curb arọ 14.5T
Ikike Oche 32 + 1 + 1/47 + 1 + 1 (ụlọ mposi) / 49 + 1
FOTON U12 Single Windshield nchịkwa nwere atụmatụ akọwapụtara nke ọma yana ịwube ọkụ kacha mma, na-ewulite ebe ndị njem na-adị mfe ma nwee obi ụtọ.
Ndị ọkụ eletrik
N'ihu Ọnụ .zọ
Foton nwere akara ọkwa nke mba dị iche iche nke digitization, ngwa nyocha ngwa ngwa, bed-bed bed, axle load, ABS test-bed, sistemụ nyocha nyocha breeki na ndị ọzọ, Ichekwa asambodo na nzere ntozu sitere na German TUV Rheinland na CNAS
A kwadebere Foton na oche ndị ọkachamara na egwu ule dị iche iche iji mee ka ntụkwasị obi na arụmọrụ nke akụrụngwa na sistemụ ụgbọ ala Foton dabara. Site na usoro siri ike ma sie ike, ụgbọ ala Foton na-eguzogide n'akụkụ na isi na nkwekọrịta na-egbochi ntanye mpụta. Tupu ha abanye na ọrụ, ha na-anwale ule na nkwenye siri ike.